Maxaa dhici kara haddii kulanka Baarlamaanka ee maanta lagu ansixiyo muddo kororsi.? | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maxaa dhici kara haddii kulanka Baarlamaanka ee maanta lagu ansixiyo muddo kororsi.?
Maxaa dhici kara haddii kulanka Baarlamaanka ee maanta lagu ansixiyo muddo kororsi.?
Xildhibaanada Baarlamaanka FS ayaa la filayaa in maanta ay kulan ku yeeshaan Muqdisho, waxaanna sii kordhaya walaaca laga qabo in ajandaha kulankaasi lagu soo daro dalab ku saabsan in Dowladda waqtiga loo kordhiyo.
Muddooyinkii u dambeeyey waxaa sii kordhayay baaqyo ka imaanayey jihooyin kala duwan, oo ay ku jiraan Xisbiyadda mucaaradka iyo beesha caalamka, kuwaa oo dalabanayey in Dowladdu ay ka shaqeyso sidii ay doorashadu waqtigeeda ugu dhici lahayd.
Madaxda Dowladda ayaa ilaa iminka ka meermeeraya in ay caddeeyaan mowqifkooda la xiriira xilliga la qabanayo doorashadda, iyada oo waqtigii loo madlanaa in doorashadu ay dhacdo ay ka harsan tahay in ka yar 6 bilood.
Haddii muddo kororsi ay maanta ku dhawaaqaan Baarlamaanka, waxaa laga cabsi qabaa qalalaase siyaasadeed inuu dalku galo, waxayna taasi sababi kartaa in dhaawac culusi uu soo gaaro kalsoonidii lagu qabay Baarlamaanka Soomaaliya.
Previous articleShil diyaaradeed ka dhacay Hindiya
Next articleFederal lawmakers plan to announce extensionĺ
Bangiga Dhexe ee Soomaliya oo Boob Xoogan uu ka socda ...
Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya Sarreeye guuto Odowaa Yuusuf Raage oo...